Ku ciyaar “Go By Greenways” | Portland.gov
Ku ciyaar “Go By Greenways”
Greenways ka xaafadu waa wadooyin aan buuq lahayn, oo tartiib loo maro oo ay fududahay in lagu lugeeyo, lagu wado kabaha taayirada leh, baaskiil, ama lagu ciyaaro. Laanta Gaadiidka ee Portland (PBOT) waxay dhisaysaa 25 mayl oo wadooyinka cagaaran ah lagana dhisaayo Bariga Portland waxayna samaysay tartanka “Go By Greenways” si ay uga dhigto wax lagu baashaalo wadooyinka cusub ee laga dhisaayo Bariga Portland.
Waa maxay "Go By Greenways"?
Go By Greenways waa safar duur maris ah ood ciyaari karto adoo soo soo arkaaya wadooyinka bii'ada u roon ee xaafada oo laga dhisay Barigga Portland, labo kamid ah waxay isku xiraan waqooyiga iyo koonfurta ee xaafadaha 130aad iyo 150aad, iyo marinka geeska wadada oo cusub iyo laymanka baaskiilka oo laga dhisay wadada SE 136th Ave. Aagaan waxaa ku yaala aagag waawayn oo cagaaran, beeraha raaxada, iyo dugsiyo, iyo Beerta Raaxada ee Powell Butte Nature Park.
Dheel ciyaarta waqti kamid ah muddada u dhexaysa 26ka Agoosto illaa 17ka Oktoobar waxaana lagu gelin doonaa abaal marinta asbuuclaha ah iyo dabcan, abaalmarinnada waawayn ee dhammaadka la bixiyo.
Ciyaaristu waa fududahay:
Arag qariirada si aad u aragto meesha aad ka helayso Jeerta PBOT ee wadooyinka greenways iyo ganacsiyada kuu dhawdhaw.
Raadi boorka PBOT Zebra (tusaale),
Fariin qoraal ugu dir erayga muhiimka ah ee ku qoran boorka 888-520-0526, waxaana si ootomaatig ah laguu galinayaa inaad ku guulaysan karto abaal marinno ay bixinayaan ganacsiyada maxaliga ah.
Sii wad ku dalxiisida deegaanka oo raadi jeerar kale.
Soo degso ama daabaco nuqulka PDF ka ee qariirada
Waxaan abuurnay qariirada Google oo aad u adeegsan karto safarkaaga.
Qariirada Google ka oo oonleen ah
Maxaan ku guulaysan karaa?
Dadka ku guulaysta abaal marinnada si qori tuur ah ayaa loo xulan doonaa asbuuc kasta, waxaana loogu soo sheegi doonaa fariin qoraal ama wicitaanka taleefanka. Dadka abaal marinta wayn ku guulaysta ayaa si qori tuur ah loo xulan doonaa kadib Oktoobar 17deeda.
Abaal marinta wayn: $500 oo kaarka hadiyada ood ku galayso Winco (labo ayaa la heli karaa)
Abaal marinnada dheeraad ah waxaa ku jira shahaadooyin ay bixinayaan ganacsiyadu sida:
...iyo kuwo kale
Barnaamijka Laanta Gaadiidka ee Portland (PBOT) ee Go By Greenways wuxuu bilaabanayaa Oktoobar 17, 2021 wuxuuna dhamaanayaa Sibteembar 26, 2021.
Arag xeerarka tartanka
Sida aad u arki karto wadooyinka cusub ee greenways ee xaafadaada
Dhammaan shabakada Neighborhood Greenways ayaad heli kartaa si aad ugu adeegsato imaatinka aagaan iyo safaradaada maalin kasta. Waxaad shabakada ka fiirin kartaa Webseedka Greenway ama qariiradeena oonleenka ah ee baaskiilka. Halkaan ayaad ka helaysaa mashruucyadii ugu cusbaa ee aad arki karto intaad raadinayso jeerta:
Wadada 150s Neighborhood Greenway rayaa iskuxirka waqooyi iyo koonfur inta u dhexaysa SE Powell Blvd iyo NE Halsey St, ayadoo isku xirta 3.7 mayl oo wadooyinka taraafigu ku yar yahay iyo marinnada aadka loo isticmaalo. Ayadoo qayb ka ah dhismaha, PBOT ayaa dhistay wadada SE Morrison St oo u dhexaysa wadooyinka SE 154th iyo 155th si ay u helaan wado toosan oo loogu talagalay dadka ku safraaya greenway.
Xog ku saabsan 150s Neighborhood Greenway
Wadada 130s Neighborhood Greenway waxay isku xirtaa waqooyi iyo koonfur ayadoo sii marta wadooyinka lambarka leh ee ku dhaw 130s oo marta Bariga Portland. Wadadu waxay martaa wadfooyinka 128th, 129th, 130th, iyo 131st oo leh jidad kaladuwan oo wadada ka leexda. Marka lagasoo tago ku ruclaynta wadooyinka dhexdooda, wadada 130s Neighborhood Greenway waxay siinaysaa wado joogto ah, oo fudud oo lagu wado baaskiil ama lagu lugeeyo lagasoo bilaabo marinka 1-84 SE Foster Road, taasoo ku siinaysa wado aan buuq yar markaad baaskiil ku wado bustling 122nd Avenue. Waxay ku xirtaa marinnada baska ee TriMet bus wadooyinka NE Glisan Street, SE Division Street, SE Powell Boulevard, halka ay marinka baska ee MAX ku xirto wadada E Burnside Street. Waxay dadka ugu xirtaa si fudud Dugsiga sare ee David Douglas, iyo sidoo kale dugsiyada Hoose ee North Powellhurst, Lincoln Park, iyo Gilbert Heights. Waxayna marin fudud ka bixinaysaa aaga cagaaran ee ku yaala jardiinooyinka John Luby, East Holladay, Lincoln Park, iyo Gilbert Heights.
Muuqaalka koobaad: 130s Neighborhood Greenway
Mashruuca Dhisida Geesaha Wadada SE 136th Ave dhawaan ayaa dib u dhisay SE 136th Avenue oo u dhexaysa SE Division Street iyo SE Foster Road korna u qaaday isku socodka Powell Butte Nature Park, Gilbert Hydro Park, Gilbert Primary Park, Leach Botanical Garden, Zenger Farms, Lincoln City Park, Lincoln Park Elementary School, Gilbert Heights City Park, Kingsley D. Bundy Park, iyo Dugsiga Hoose ee Gilbert Heights.
SE 136th iwaxaa mara laymanka baska ee TriMet bus ee 17 iyo 10. Hormarinno cusub oo lagu sameeyay meelaha wadooyinka laga gooyo ayaa ka caawin doona qof kasta inuu baska u tago si badqab leh.
Qaar kamid ah qaybaha Mashruuca waxaa kamid ah:
Wado 1.8 mayl ah oo dib loo balaarinaayo
Marinka geeska wadada 1.8 mayl lasii wadaayo geeska galbeed ee wadada si loo taageero Marinnada Amaanka ah ee Dugsiga
3.6 mayl oo laymanka baaskiilka oo dhawrsan ah (1.8 mayl gees kasta)
48 rakooyinka Gaari Curyaanka ADA oo cusub ama la casriyeeyay si loo xaqiijiyo in dadka ku lugaynaaya iyo kuwa gaari curyaanka wata ay si fudud ugu gudbaan geeska wadada
Xog ku saabsan Dhismaha SE 136th Paving iyo Sidewalks to Opportunity
Daryeel dariskaaga adoo raacaaya Tilmaamaha Badqabka ee COVID-19
Kafogoow 6 fiid dadka kale
Gudaha hakasoo bixin haddii aad jiran tahay
Buuxi xog aruurinta
Neighborhood greenways way ka badan wado caadi ah. Khibradaha PBOT ka baratay dhisida wadooyinka, waxaan aragnay qaabab badan oo xubnaha bulshadu ay ku abuuraan isgoysyadooda riinjiyaynta, bandhiga farshaxanka, ama qabashada munaasabadaha iyo mashruucyada waawayn ee bulshada.
Ka qaybgal xog aruurinteena si aad noogu sheegto waxa aad doonayso inaad ku aragto wadaada greenway.
Waxaad xog aruurintaan ku buuxin kartaa Af-Soomaali adoo ka dooranaaya luuqada dookhyada hoose ee qaybta sare ee bogga xog aruurinta:
Xog aruurinta Go By Greenways
Участвуйте в конкурсе «Go By Greenways»!
Participe en Go By Greenways - Español (Spanish)